Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya fal dil ah oo lagu xasuuqay dad shacab Abriyo ah oo aan waxba galabsan xilli dadkaasi ay wadeen Meydka qof haween ah.
dilalka ayaa joogta ka ah Muqdisho iyo duleedkeeda
Ilo wareedyo ay Shabakadda SomaliMeMo helayso waxay sheegayaan in dilka ay geysteen maleeshiyaadka Katirsan DF-ka oo ay adeegsadeen dhinacyo ashahaadda ladirir ah balse qoraal uu qof xog ogaal ah ku baahiyay baraha bulshada ayuu uga sheekeeyay sidii ay wax u dhaceen iyo deraanka qoyska dadka laga laayay.
Maleeshiyaadka hubeysan ee wax dilay waxay wateen qoryaha dabajeexa loo yaqaan ama PKM waxayna ahaayeen ciidamo watay dareeska lagu yaqaan ciidanka Melleteriga Dowladda Federaalka balse warbaahinta Muqdisho waxay warkan kusoo gaabiyeen "Kooxo hubeysan oo dad ku dilay duleedka Muqdisho", DF-ka qudheeda waxba kama dhihin oo afka ayaa ju'da gabay.
Gaariga sida la ii sheegay quraan ayaa ka shidnaa, qof walbana wuu ka murugeysnaa tacsida eedadood balse maxaa dhacay?.
1- C/casiis Xaaji Gaabow
2- Maxamed Deeq Xaaji Gaabow
3- Cabdi Xaaji Gaabow
4- C/jabaar Xaaji Gaabow
5- Cabdi Rashiid Maxamed Yare.
6- Zakariye Maxamed Gaabow
• HALKEE AYEY DAGNAAYEEN ?.
Waa qoys caan ka ah xaafada macmacaanka gaar ahaan degmada Dharkeynley ee magaalada Muqdisho, aabahood Xaaji Gaabow waa ganacsado weyn oo si weyn looga yaqaan guud ahaan Muqdisho.
Wiilasha walaalaha ee la laayay waxey ganacsiga lawadadeen abaahood, waxeyna lahaayeen Xarumo ganacsiga sida Hoteelo, Isbitaalo, Goobo shacabka loogu adeego, Travel agent iyo Shirkad koronto ah.
• HOOYADOOD "Wiilasheeyda wey ii soo laabanayaan".
Xitaa hadal kama soo baxayo, marna waa ooysaa, marna qof kale waaye, marna caruurteedii ayey leedahay "wey ii imaanayaan".
• Isbadalka ku dhacay Qoyskii Dhibaatada Soo Gaartay
Horta qof walbo oo dareen leh wuu dareemi karaa qoys 6 qofood ay ka baxeen halmar xanuunka ay leedahay. Shalay guriga waa laga faraxsanaa, maantana tacsi tii ugu darneed ayaa taala.
Dad badan oo dagan xaafada Macmacaanka ayaa daqiiqad walba waxey imaanayaan guriga, iyagoo tacsi u wada faamilka dhibaatada soo gaartay.
XAASKIISA HORE WAA LAGA DILAY
Odayga caruurtiisa laga dilay Xaaji Gaabow ayaa horay xaaskiisa hore la dilay, shalayna Caruurtiisa oo afar ah ayaa aduunka la dhaafiyay. Innaa lilaah wa innaa ileeyhi raajicuun
Aabe Xaaji Gabow wuxuu diiday in xoolo iyo wax la qalo, wuxuu kaliya umadda Islaamka gaar ahaan Somalida ka codsaday wiilashiisa ducada lagu kaalmeeyo
Waxaa Facebook Ku Qoray: Idiris Abdulkadir Mohamed